हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ नारा लगाउदै राजावादीहरु राजतन्त्र फर्काउन सडकमा,अब होला त सम्भव ? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ नारा लगाउदै राजावादीहरु राजतन्त्र फर्काउन सडकमा,अब होला त सम्भव ?
8 months ago सुबास घिमिरे
जनकपुर । राजतन्त्र फर्काउनका लागि राजावादीहरुको सक्रियता बढ्न थालेको छ । राष्ट्रवादी नागरिक समाजको अगुवाईमा राजतन्त्र फर्काउन भन्दै शनिबार उनीहरुले देश व्यापी रुपमा अभियान शुरुवात गरेका छन् । सोही क्रममा जनकपुर धाममा समेत शनिबार र्याली निकालिएको छ ।
राजतन्त्र समर्थकहरुको र्यालीले जनकपुरधाम नगरको विभिन्न भाग परिक्रमा गरेको थियो । नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेका सहभागीहरुले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र
शाहको समर्थनमा नाराबाजी समेत गरेका थिए। र्यालीमा सहभागीहरुले राजतन्त्र पुनर्वहाली गर, भ्र’ष्टाचार अन्त्य गर, हत्याहिंसा बलात्कारजस्ता जघन्य आ’पराधिक घ’टना नियन्त्रण गर लगायतका नारा लगाएका थिए ।
राष्ट्रवादी नागरिक समाजको उक्त अभियानका संयोजक चन्द्रबहादुरले देशमा भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढिरहेको, ब’ला त्कार, ह त्याहिं’सा जस्ता घटनाहरु दिनदिनै बढ्न थाल्दा समेत सरकार मुकदर्शक बनेको भन्दै
राजतन्त्रनै फर्काउनु पर्ने दाबी गरे। उनले अहिले का संसदीय दलहरुबाट देशलाई बचाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले देशले राजतन्त्रको खाँचो महशुस गरेको उनको भनाइ थियो ।
उपसंयोजक लक्ष्मी मल्लले देशमा राजतन्त्रको पुनर्वहाली नभएसम्म देशभरी महाअभियान जारी रहने बताइन् । उनले देशमा चाँडै नै राजतन्त्र फर्किने दाबी समेत गरिन् । उनले समावेशी राज्यसत्ता सहितको शासनले नै देशमा समृद्धि ल्याउने बताइन् ।
Previous अचुक औषधि हुने भएकाले अभियानकै रूपमा गुर्जाे रोप्दै ट्राफिक प्रहरी,यो कार्य सहि या गलत? प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।
Next किसानको मास्टर माईन्ड : बाँदर धपाउन बाघको राखेको यस्तो तस्बिर प्रयोग !,,हेर्नुहोस